प्रधानमन्त्री ओलीले पढाएको राष्ट्रवाद « Amsanchar
करिब एक महिना अघि प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्न लागेको खुसीयालीमा भोज भत्तेर गर्दै हिड्नेहरुलाई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले टाउँको दुख्नु स्वाभाविक नै हो । ढल्छ–ढल्छ भनेको ओली सरकार अडिनु र त्यसमा पनि ओलीको चमत्कारीपूर्णढङबाट राष्ट्रवादी छवी निर्माण हुनुले उनका विरोधीहरु छट्टपटाउनु पनि स्वभाविक नै हो । यो राजनीतिको खेलमा ओलीले आफ्ना समकालिन राजनीतिज्ञहरुलाई धेरै पछाडी छोडिदिएका छन् ।
ओली वाहेक उनका समकालिन राजनीतिज्ञहरु अरु कसैले पनि भारतसंग जुध्ने आँट र साहस देखाउने थिएनन् भन्ने कुरा आमनेपालीको मनमा पारिदिएका पनि सत्य नै हो । उनले थालनी गरेको भूमी फिर्ता अभियानलाई पार्टीभित्र र वाहिरमात्रै होइन, आमनेपालीले एक मना एकताका साथ र सहयोग गरिरहेका छन् । र, भनिरहेका छन– यो लडाईको मोर्चामा तिमी एक्लै छैन, हामी पनि तिम्रो साथ छौ भनिरहेका छन् । इतिहासमा गुमेका भूमी फिर्ता ल्याउने उनले अभियान चलाएकोमा उनलाई आम नेपालीले बीर योद्धा भनिरहेका छन् । जो कोहीको पनि हामीले गुण र दोषको आधारमा मूल्याकन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ छ । जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रै भन्नु पर्छ ।
राम्रो कामलाई राम्रो ग¥यो भन्नु कामको समर्थन मात्रै पनि होइन, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई थप उत्साहित पार्नु पनि हो । तर, हामीकहाँ राम्रा गर्नेलाई पनि नराम्रो गर्नेलाई पनि एउटै डोकोमा मिसपास पारेर विरोध गर्ने प्रचलन छ । राम्रो काम गर्ने र नराम्रो गर्नेबीचको भेद जबसम्म छुटाउने प्रचलन बसाल्दैनौ, तव सम्म हामी सभ्यसमाज निर्माण र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैनौ ।
हामी होइन, इतिहास बोल्छ नेपाल निर्माण यताको इतिहासमा गुमेको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । त्यो आँट र सहासका लागि उनलाई सलाम छ । यस अघि चर्को राष्ट्रवादका धेरै नेताका धेरै भाषणहरु नसुनेको पनि होइन । ती नेताहरु पटक–पटक यो देशको प्रधानमन्त्री नभएका पनि होइनन् । अनि, खोइत उनीहरुले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवहारमा राष्ट्रवादी चरित्र देखाएको ? राष्ट्रवादका चटके कुरा गरेर मात्रै हुन्छ, आफू पदमा भएको बेला व्यवहारमा राष्ट्रवादी काम गर्नु पर्दैन ? पटक –पटक हाम्रो सीमा भारतले मिच्दा सिहदरवारको कुर्सीच्यापेर चुपचाप बस्नेहरुले चर्को राष्ट्रवादको कुरा गरेको सुहाउँदैन् ।
हामीले वर्षे पहिलेदेखि भन्दै आएको साँचिकै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न जग ओलीले निडरताका साथ खनेको छन् । उनले यसबीच आमनेपालीको ह्रदयबाटै उर्लिने राष्ट्रवाद के हो भनेर हामीलाई पढाई दिएका छन्। यो सामान्य र चानचुन कुरा होइन । यदि यो सामान्य थियो भने अहिले मात्रै होइन, यस अघि पनि भारतले हाम्रो सीमा मिचेका थिए ? त्यतिबेला यस अघिका प्रधानमन्त्रीले के हेर बसे ? उनीहरुलाई भारतले मिचेको भूमिबारे भारतीय सरकारसंग वार्ता गर्न कसले रोकेको थियो र ? हो, यो पक्कै पनि प्रधानमन्त्री एक्लै ले गरेको भने होइन । यसमा उनको टिम र आम राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन छ । तर, पनि यो काम उनकै नेतृत्व र पहलकदमीमा भएको हो । यस कार्यमा सबै भन्दा बढी जोखिम प्रधानमन्त्रीले नै मोल्लनु भएको छ । उनले खुलाएका छन– हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतसंग नझुकेकै कारण उनले सत्ताबाट हात धुनु परेको थियो । र, अहिले पनि उनले भनेका छन–देशको भूमि भन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री पद होइन, त्यसैले भारतसंगको अतिक्रमित सीमा लडाईमा प्रधानमन्त्री पदलाई दाउँमा राखेको छु ।
राष्ट्रियताको सवालमा हामी यस अघि हामी कहिले एकै ठाउँ नउभिएका कारण नै भारतीय सरकारले हाम्रो लुट्दै आएको हो । र, हाम्रो भूमीमाथि निरन्तर भारतले अतिकक्रमणको बुल्डोजर चलाउँदै आएको हो । राष्ट्रियताको सवालमा पनि यस अघि हामी एक आपसमा जुधेकै कारण भारतले हामी भित्रको विवादमा खेलेर फाईदा उठाउँदै आएको हो ।
राष्ट्रियताका एजेण्डाहरुमा जवसम्म हामी एक भएर उसंग प्रतिवाद गर्दैनौ, निश्चित छ, भोली हामीले हाम्रो सन्ततीहरुलाई छाडेर जाने भूमिहरु बाँकी राख्दैनौ । भारतले हाम्रो भूमिरुपी छातीमाथि अतिक्रमणको बुल्डोजर तीव्रगतिकासाथ चलाईनै रहने छ । हामी भनी सधै–सधै अपमानित भएर आफ्नै सरकारलाई सराप्दै असन्तुष्टिका तितोहरु पोखिरहेका छौ । हो, यही पारालाई हामीले निरन्तरता दिने कि, आउँदा दिनहरुमा अब फरक बाटो समात्ने ।
हो, हामी भारतसंग लडाई लड्न सक्दैनो होला । गुमेको जमिन फर्काउन उसंग सघर्ष गर्ने अन्य तौर–तरिका छौनन र ? हो, एकसाथ एकमना एकताका साथ लागौ असम्भव केही छैन् । असम्भब छैन भन्ने कुरा विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै देखाईसकेका छन् । लामो समयसम्भ भारतले नाकाबन्दी लगायो । तर, आमजनताले कष्टपूर्ण जीवन भोगेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दरो साथ दिए । चर्को अभाव र असहज जीवनशैलीका बीच पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडान ठिक भनिरहे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली पनि शतिसाल झै आफ्नो अडान अडिक रहिरहे । इतिहास साक्षी, अन्तत भारत झुक्न वाध्य भयो । सौभाग्यवस आज पनि तिनी प्रधानमन्त्री ओली हामीले पाएका छौ । र प्रधानमन्त्रीले उद्घोस गरिसकेका छन इतिहासमा गुमाएको भूमीहरु भारतसंग फिर्ता लिएरै छाड्ने ।